March 11, 2018 - TV Annapurna
यस्तो आयो गगन थापालाई ओलीको जवाफ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस नेता गगन थापालाई जवाफ दिएका छन्। आइतबारको संसद बैठकमा थापाले प्रधानमन्त्रीमाथि विगतमा फाटेको धोती लाउनेको मन मधेसकेन्द्रीत दलबाट मत पाउँदैमा नजोडिने टिप्पणी गरेपछि ओलीले संविधान अपरिवर्तनीय नभएको र आफू संशोधनका लागि तयार रहेको बताए। ‘धोती लाउनेले बिर्सेको छैन भनेर सम्झाउन खोजियो होला’, उनले भने– ‘मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, संविधान अपरिवर्तनीय होइन, कुनै हालतमा संशोधन गर्दैन भनेर हल्ला फैलाइयो। औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुनसक्छ।’ हिजो संविधान निर्माणका क्रममा दबाब केन्द्रले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल बनाउन दबाब दिएको स्मरण गर्दै भने– संशोधनमा स्वार्थ हुनसक्छ। आफ्नो आफ्नो…
तिलोत्तमा गोल्डकपमा नेपाल पुलिस बिजयी
बुटवलमा जारी तिलोत्तमा गोल्डकपमा नेपाल पुलिस बिजयी भएको छ। बुटवलको फिफा टेक्नीकल सेन्टरमा आइतबार भएको खेलमा शसस्त्र एपिएफलाई १—० ले हराउँदै नेपाल प्रहरी बिजयी भएको हो। खेलको ७२ औं मिनेटमा तेज तामाङले गरेको गोलले नेपाल प्रहरीलाई जित दिलायो। खेलको म्यान अफ द म्याच पनि तामाङ्गनै घोषित भए। उनी ११ हजार पुरस्कार हात पार्न सफल भए। सोमबार हुने खेल थ्रि स्टार र फ्रेण्डस क्लब काठमाडौंबीच खेल हुने एन्फा रुपन्देहीका सचिव लोक पुनले बताए। चैत्त ३ गतेसम्म चल्ने गोल्डकपमा ए डिभिजनका ७ सहित १० टोली सहभागी छन्। प्रतियोगीताको बिजेताले ७ लाख ७७…
बोक्सी आरोपमा कुटपीटको घटनाको बिरोधमा प्रदर्शन
घोडाघोडी न पा को ५ नम्बर वडा देउकलियाकी बालिका राधा चौधरीलाई बोक्सीको आरोपमा गरिएको चरम अमानवीय व्यवहार को बिरोध कार्यक्रम गरिएको छ । कैलालीको सुखडमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसको नेतृत्वमा बिरोध प्रदर्शन गरिएको हो । बिरोध कार्यक्रममा अमानवीय घटनामा सङ्लग्न सबैलाई कानुनी कट्घरामा ल्याएरै छोड्नु पर्नेमा जोड दिईएको थियो । पीडित लाई न्याय नदिई दोषीलाई उम्काउन खोजीए थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत विदुयार्थीले चेतावनी दिएका छन् । उनिहरुले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरि दोसि लाई कडा कार्बाही हुनुपर्ने, पीडितलाई नि शुल्क स्वास्थ्य उपचार हुनुपर्ने, पीडितको नि शुल्क उच्च…
राष्ट्रिय जनावरको विजोग, व्यवस्थापनमा उदासीनता
March 11, 2018 March 11, 2018 Annapurna TV
विनोद देवकोटा दुध दिउन्जेल घरमा राखेर पाल्ने अनि दुध दिन छोडेपछि सडकमा लिएर छोड्ने गरेकाले कैलाली लगाएत देशका विभिन्न ठाउमा छाडा पशु चौपायाको समस्या उत्पन्न भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय जनावर र लक्ष्मीको रुपमा पुजीने गाईको दयनिय अवस्था देखिएको छ । कतीपय खान नपाएर वा भोकले मरेका छन् भने बाचेकाले स्थानियको बाली नाली खाएर दुख दिईरहेका छन् । जथाभावी रुपमा छोडिएका छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि कैलालीमा मात्रै करिव १ करोडको हाराहारीमा बजेट पनि छुट्याईएको थियो । तर यतीका धेरै बजेट छुट्याईएको भएपनि समस्यामा भने खासै कमी आएको छैन । यो…
पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरी जुत्ता प्रहार
पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरी जुत्ता प्रहार भएको छ । आइतबार पाकिस्तानी शहर लाहोरमा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीसफलाई लक्षित गरी एक व्यक्तिले जुत्ता प्रहार गरेका पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम डनले जनाएको छ । जमिया नाइमिया नामक मश्जिदमा आयोजित मुश्लिम धर्मगुरु मफ्ती मोहम्मद हुसैन नाइमीको वार्षिक पुण्य तिथिका अवसरमा आयोजित श्रद्धाञ्जलि सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शरीफमाथि आक्रमण भएको बताइएको छ । पाकिस्तानमा पछिल्ला केही दिनमा उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्वलाई लक्षित गरी आक्रमण प्रयास भएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफलाई जुत्ता आक्रमण प्रयास भएपनि शरीफले आफ्नो सम्बोधनलाई नरोके पनि छोट्ट्याएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्…
टायर उछिट्टिएर बस दुर्घटना, १७ जना घाइते २ को अवस्था गम्भीर
नुवाकोटमा बस दुर्घटना हुँदा १७ जना घाइते भएका छन् । त्रिशुली–देवीघाट सडकखण्डको विदुर नगरपालिका वडा नं. ५ पिपलटारमा आइतबार दिउँसो त्रिशुलीबाट देवीघाट जादै गरेको बा १ ख ६५१९ नम्बरको लोकल बस दुर्घटना हुँदा १७ जना घाइते भएका हुन् । टायर उछिट्टिएर बस सडकमै पल्टिएर दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा घाइते १७ मध्ये गम्भीर अवस्थाका दुई जनालाई उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ भने १३ जनाको नुवाकोट सिटी अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
कलाकार रोमा न्यौपाने जेल चलान
एक खुट्टाको भरमा नाचेर चर्चामा आएकी कलाकार रोमा न्यौपाने जेल चलान भएकी छन्। जिल्ला अदालत, काठमाडौंले तोकेको ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी तिर्न नसकेपछि उनी जेल चलान भएकी हुन् । हाल उनलाई केन्द्रीय कारागार चलान गरिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका डिएसपी मोहन थापाले बताए । यसअघि २४ फागुनमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । रोमासहित उनका पति चिरञ्जीविविरुद्ध ३६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको थियो । उनका पति पक्राउ परे पनि रोमा भने फरार थिइन् । उनीहरूले भोल्युन्टर एसोसिएसन अफ डिसेबलिटिज भीएडी नामक संस्था खोलेर ‘भीएडी नेपाल लघुवित्त कार्यक्रम’…
प्रधानमन्त्रीको दिनगन्ती सुरुः गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दिनगन्ती बाट सुरु भएको बताएका छन् । चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रका भएका कतिपय महात्त्वाकांक्षी योजनाहरु पढेर सुनाउँदै थापाले भने, ‘आजबाट दिनगन्ती सुरु भएको छ । नो इफ नो बट । आजबाट हामी प्रतिपक्षमा बसेर हिसाबकिताब लिन्छौं । उधारो होइन, नगदमा खनखनी ।’ उनले त्तापक्षको बहुमत हुँदाहुँदै किन दुईतिहाइ चाहियो ? यो दिव्यशक्तिको कारण र नियत के हो ?’ प्रधानमन्त्री चाहिनेभन्दा बढी बलियो बनाउन चाहेर सत्तापक्षले आशंका जन्माएको थापाको भनाइ थियो । कांग्रेस नेतृ पुष्पा…
जुवा खेल्ने खालबाट दुई जना प्रहरी पक्राउ
दुई जना प्रहरी अधिकारी जुवाको खालबाट पक्राउ परेका छन् । उनिहरुलाई महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा प्रहरी महाशाखाका हवल्दार इन्द्र थापा र प्रहरी जवान सुरज थापा छन् । गएराति काठमाडौं प्रहरी परिसरले काठमाडौं–२६, गोंगबुस्थित कालो बंगुर सेकुवा घरमा छापा हान्ने क्रममा उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । उनीहरुसँगै अन्य ५ जनालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा अन्यमा शैलेन्द्र खड्का, सञ्जयकुमार तामाङ, अरुणकुमार महर्जन, अनिल गुरुङ र विष्णु श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुको साथबाट १ लाख ४७ हजार १ सय रुपैयाँ रकम…